सरकारले काम नदिएको डा. जागेश्वरको गुनासो, तर निजीमा भ्याइनभ्याइ – Health Post Nepal
२०७८ असोज १६ गते १३:३४
‘आजदेखि फेरि काममा फर्किए, एकैदिन पाँचवटा अप्रेशन गरियो, फेरि मज्जा आयो, काममा फर्काइदिनेलाई मुरी–मुरी धन्यवाद,’ कोभिड युनिफाइड अस्पताल (वीर) को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीबाट हटाइएको भोलिपल्टै डा. जागेश्वर गौतमले २० साउनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
डा. गौतमलाई सरकारले साउन १९ गते परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सरुवा गरेको थियो। तर, उनी प्रसुती अस्पतालमा हाजिर भएनन्।
२० साउनमा (एकैदिन) ओम अस्पतालमा गएर पाँचवटा अप्रेशन गरे।
परोपकार प्रसुती अस्पताल प्रशासनका अनुसार डा. गौतम अहिले घरयसी बिदामा छन्। वीरबाट सरुवा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उनी काममा फर्किएका छैनन्।
‘असोजसम्म घरयासी बिदा लिनुभएको छ। बीच-बीचमा भने आइराख्नु भएको छ,’ अस्पतालकी निर्देशक डा. संगिता मिश्राले भनिन्।
प्रसुतीमा सरुवा भएपछि डा. गौतम एक-दुई दिन अस्पताल पनि गए। अस्पताल प्रशासनले डा. गौतमलाई युनिट दुईको प्रमुखको जिम्मेवारी दियो।
तर, उनले त्यो जिम्मेवारी लिएनन्।
उनले योग्यताअनुसार काम नदिएको गुनासो गरेका छन्। ११ औं तहका विशेषज्ञका रुपमा निर्देशक नदिएको अवस्थामा विभागीय प्रमुख नै उपयुक्त जिम्मेवारी हो।
त्यसमा पनि हालकी निर्देशक डा. मिश्रा डा. गौतमभन्दा बरिष्ठसमेत हुन्। त्यसो त स्वास्थ्य सेवामा ११ औं तहका १२० जना कार्यरत छन्। सबैले डा. गौतमकै भाषाको ‘उपयुक्त जिम्मेवारी’ पाएका छैनन्।
‘सरकारी सेवामा दौडधुप गरेको ३९ वर्ष बितेछ। मन्त्रालयको प्रवक्तामा हुँदा एक दिन पनि बिदामा बसिनँ। अहिले घरायसी काम पनि मिलाउनु छ। शरीरलाई अलि आराम दिनुपर्यो भनेर बिदामा बसेको हुँ,’ डा. गौतमले भने।
के सरकारले उनलाई अपमानित गरेकै हो?
वीरमा सिनियर हटाएर जुनियर ल्याएको र आफूभन्दा कनिष्ठ नेतृत्व रहेको ठाउँमा पठाएको तथा योग्यता अनुसारको काम नपाएकोजस्ता कारणले बिदामा बस्नुपरेको डा. गौतमको गुनासो छ।
‘मैले जुन स्पिडले काम गरेको थिएँ, त्यही खालको काम लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, सरकारले वीरमा सिनियरलाई हटाएर जुनियर ल्यायो। प्रसुतीमा पनि निर्देशक भइसकेको मलाई अहिले तल राखेर काममा पठाइयो। मलाई अपमानित गरेकै हो,’ डा. गौतमले भने।
प्रसुतीमा निर्देशकको रुपमा रहेका डा. गौतमलाई तत्कालिन सरकारले २०७७ जेठ २५ मा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो। खरो स्वाभावका डा. गौतमले एक वर्ष मन्त्रालयको प्रवक्ताको काम गरे।
समग्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनको कार्यकाल प्रभावकारी तथा विवादास्पद दुवै रह्यो।
कोरोना महामारीले उच्च गति लिँदै गर्दा उनले कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर) को प्रमुख अधिकारीको जिम्मेवारी पाए।
सरकार परिवर्तन भएपछि उनीलाई १९ साउनमा विशेषज्ञताको हिसाबले प्रसुती गृहमा सरुवा गर्यो।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भने गौतमको जिम्मेवारीकाबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनको सचिवालयमार्फत कुराकानीको विषय बताएपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा विभिन्न ठाउँमा बोलिसकेको भन्दै पन्छिए।
प्रसुतीगृहकी निर्देशक डा. मिश्राले भने सरकारी सेवामा जिम्मेवारी हेरफेर स्वाभाविक भएको बताइन्। ‘निर्देशक भनेको सरकारले पत्याएर दिने अतिरिक्त र प्रशासनीक जिम्मेवारी हो, क्लिनिसियनको प्रमुख जिम्मेवारी बिरामीको उपचार नै हो। सबै बरिष्ठलाई निर्देशक नै बनाउन सक्ने अवस्था रहन्नँ’, उनले भनिन्।
‘डा. गौतमलाई विद्यार्थी पढाउनका लागि अनुरोध गरेको थिएँ। तर, जुनियरको तल रहेर काम गर्दिन भन्दै हिँड्नु भएको छ,’ डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘उमेरले तल छु होला तर, सिनियरको हिसाबले उहाँ (डा.गौतम) भन्दा माथि छु।’
सरकारले मलाई अपमानित गर्‍यो, खै अझै कति दिन बिदामा बस्छु ‘टुंगो’ छैन
प्रसुतीमा सरुवा भएपछि डा. गौतमले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई योग्यता अनुसारको भूमिका दिन वा अयन्त्रै कामको जिम्मेवारी दिन अनुरोध गर्न पुगेका थिए।
‘त्यसबेला राज्यमन्त्री श्रेष्ठले हेरौँला भनेर आवश्वासन दिनुभएको थियो। हेरेको देखिएन,’ डा. गौतमले भने।
‘राज्यमन्त्रीले खासै मेरो कुरा सुन्नुभएन। उहाँलाई त्यो अधिकार छ, छैन मलाई थाहा भएन। तर, मैले स्वास्थ्यमन्त्री कुरिरहेको छु। हेरौं त्यसपछि मेरो केही व्यवस्थापन होला कि,’ उनले भने।
सरकारीमा बिदा, निजीमा सेवा!
अहिले डा. गौतम बिहान–बेलुका ओम अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्। उसो त, उनी ओम अस्पतालका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन्।
‘बिहान–बेलुका सधैं बाहिर काम गर्ने गरेको छु। अफिस समयमा गर्दिनँ। काम नै नभएपछि बिहान–बेलुका अन्य ठाउँमा गर्नै पर्‍यो नि,’ डा. गौतम भन्छन्।
पहिल्यैदेखि सरकारीभन्दा निजीमा बढी काम गर्ने गरेको आरोप डा. गौतमलाई छ।
मन्त्रालयले सरकारी पदमा रहँदा कुनै निजी अस्पतालमा सेवा नगर्न बारबार आग्रह गर्दा पनि निरन्तर अटेरी गर्ने मध्ये उनी पनि हुन्। तर, प्रसुती अस्पतालको नेतृत्व सम्हालिइरहँदा पनि उनी ओममा गएर काम गर्ने गरेका थिए।
‘सरकारको स्वीकृत लिएर काम गरेको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँदा काम गर्न पाएको थिइनँ। मेरो अधिकार छ काम गर्छु,’ उनी भन्छन्।
अब कहिलेसम्म बिदामा बस्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा डा. गौतमले भने, ‘थाहा छैन। अहिले असोजसम्म बिदामा बसेको छु। हेरौं त्यसपछि के हुन्छ।’
डा. गौतम स्वास्थ्यमन्त्रीले नयाँ जिम्मेवारी दिएको खण्डमा काम गर्न तयार भएको बताउँछन्। ‘सरकारले उचित ठानेको खण्डमा जहाँ पनि काम गर्छु। तर, योग्यता, सीपको मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
वीरको जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि डा. गौतम सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै राजनीतिक टिप्पणीमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।
One thought on “सरकारले काम नदिएको डा. जागेश्वरको गुनासो, तर निजीमा भ्याइनभ्याइ”
उहाँ जस्तै थुप्रै आ-आफ्नै सेवा र समुह्का वरिष्ठ थिए र छन। अरुले तोकिए बमोजिम जिम्मेवारी न पाउँदा र उहाँले अर्कै समूह को पद र जिम्मेवारीमा काम पाउदा त केही बोल्नु भएन। अहिले सरकारले आफ्नै दरबन्दी मा पठाउदा अन्यथा गरेको जस्तो त लाग्दैन। Right person in right place